3MM Detector sy fiantohana sy fenitra momba ny kalita | PTJ Hardware, Inc.
Home > Momba anay > Quality
Ny PTJ CNC Factory sy ny ekipany fitantanana dia mandray tanteraka ireo fitsipika sy fomba fanao amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO, nahatratra ny fisoratana anarana kalitao ISO 9001 tamin'ny 2015.
Ny orinasa dia ISO9001: 2015 nohamarinin'ny SAI Global.
PTJ (MINGHE CNC) koa dia manaraka tsara ny fenitry ny governemanta MIL-I-45208A.
Ny rafitra fanaraha-maso henjana sy ny fitantanana famokarana dia mamela antsika hihaona amin'ireo fandaharam-pamokarana henjana indrindra sy ny takiana - izany rehetra izany dia amin'ny vidiny mifaninana tokoa.
- Ao amin'ny PTJ CNC Machining Factory, heverinay ho toy ny “feon'ny mpanjifa” ireo mpiasan'ny Quality Assurance, izay maneho ny tombotsoan'ny mpanjifanay mandritra ny famokarana.s.
Izahay koa mahita ny mpiasan'ny milina ho toy ny miovaova amin'ny fitsipi-dàlana. Ny filozofiantsika dia ny fananganana kalitao ao anatin'ilay tetikasa.
Ny rafitra kalitao ISO 9001: 2015 dia manampy anay amin'ny fifehezana ny angon-drakitra fanodinana rehetra, hahazoana antoka fa azo antoka sy milina dimensional marina.
Izahay koa mitazona ny angon-drakitra, izay manampy amin'ny fiantohana ny fihodinana haingana sy ny vidin'ny fifaninanana.
Ny orinasa PTJ (Minghe) dia mampiasa fomba fanao sy fiantohana kalitao isan-karazany hitazomana azy ISO system.
•Fitaovana fanaraha-maso voamarina toy ny, Detector roa-dimensional, 3MM, mpampitaha amin'ny famakiana nomerika sy ny gages manual maro izay manome antoka fa afaka manamarina tsara ny zavatra rehetra amboarinay izahay.
• Ny lisitra fanamarinana ny fizahana ny fifanarahana dia vita amin'ny fahazoana ny sary an'ny mpanjifa tsirairay.
• Ny fizahana voalohany dia vita amin'ny alàlan'ny mpiasa voamarina alohan'ny fanombohan'ny fanamboarana tsirairay ataon'ny mpandraharaha.
• Ny torolàlana momba ny asa amin'ny antsipiriany, torolàlana manokana ary sary dia omena an'ireo mpandraharaha ao anaty fonosana asa noforonina ho an'ny baikon'ny mpanjifa tsirairay.
• Ny fandraisana ny fanaraha-maso dia tanterahina amin'ny fahazoana fitaovam-piasana ary ny fizahana farany dia vita alohan'ny fandefasan'ny mpanjifa ny baiko.
Masinina vita amin'ny milina natao ho anao ...
Ny orinasa dia ISO9001: 2015 nohamarinin'ny SAI Global
PTJ (MINGHE CNC) koa dia manaraka tsara ny fenitry ny governemanta MIL-I-45208A. Ny rafitra fanaraha-maso henjana sy ny fitantanana famokarana dia ahafahanay rafitra mamela antsika hihaona na dia amin'ny fandaharam-pamokarana henjana indrindra na ny fepetra takiana - izany rehetra izany amin'ny vidin'ny fifaninanana.